Sidee loo gudbaa imtixaan aanad baran? | Sameynta iyo daraasadaha
Maite Nicuesa | 15/05/2021 23:51 | Talooyin
Ku gudubida imtixaanka iyada oo aan la baran gabi ahaanba waxba ma ahan dhacdo. Si kastaba ha noqotee, waxaa dhici karta inaadan wax u baran sida ugu badan ee aad u baahnaan lahayd. Iyo, in kasta oo aadan si fiican isu diyaarinin imtixaanka, waa laguu oggolaaday. Waxaa jira noocyo kala duwan oo imtixaanno ah. Kuwa leh qaab Nooca tijaabada Waxay leeyihiin faa'iidada ay ku bixiyaan jawaabta la tilmaamay ee ka mid ah xulashooyinka la heli karo. Waxaad isku dayi kartaa inaad kala soo baxdo macluumaadka adoo adeegsanaya sababayntaada. Tababarka iyo Daraasaadka waxaan ku siinaynaa shan talooyin wax ku ool ah.
1 1. Ka faa'iideyso waqtiga fasalka
2 2. Xullo dhinacyada dhabta ah ee muhiimka ah
3 3. Tilmaamaha iyo soo koobidyada
4 4. Ku xooji daraasadda qaybta ugu dambeysa
5 5. Fahamka akhriska
6 6. Iskuday
1. Ka faa'iideyso waqtiga fasalka
Fiiro gaar ah ayaa fure u ah maadaama ay kujirto jadwalka fasalka ee inta badan waxbarashadu ka dhacdo. Xusuus qor oo qor haddii aad u malaynayso inay lagama maarmaan tahay. Maxaa intaa ka badan, weydii macallinka wixii su'aalo ah ee aad hayso. Waxaa laga yaabaa in shakigaasi uu isna leeyahay saaxiib kale oo ay isku fasal yihiin. Iyo, sidaa darteed, jawaabta macallinka waxay ka caawineysaa qof kasta oo jooga inuu si fiican u fahmo gabal macluumaad ah.
2. Xullo dhinacyada dhabta ah ee muhiimka ah
Haddii aad haysato waqti yar oo aad wax ku barato, maxaa yeelay taariikhda imtaxaanka xiga ayaa soo dhowaanaya, xulo qodobbada muhiimka ah ee muhiimka ah oo diiradda saar iyaga. Magac ahaan, wuxuu meesha ka saarayaa arrimo kale oo laga yaabo inay diiradda u saaran tahay imtixaanka. Si kastaba ha noqotee, markay duruufahani dhacaan, waxaad u isticmaali kartaa istaraatiijiyaddan inaad la xiriirto waqtiga aad heli karto barashada su'aalahaas oo laga yaabo inay u badan tahay inay galaan imtixaanka.
3. Tilmaamaha iyo soo koobidyada
Farqi weyn ayaa u dhexeeya inaad wax walba ka ogaato mowduuca iyo inaadna ogeyn wax macluumaad ah. Sidaa darteed, waxaad sidoo kale fududeyn kartaa waxa ku jira isla markaana aad ku soo koobi kartaa xaqiijinta jaantusyada iyo soo koobidyada kaa caawinaya inaad ku gudubto inkastoo aad wax yar baratay. Kahor intaadan samayn shaxda, hoosta ka xariiq qoraalka. Ku calaamadee midab aad jeceshahay, ama qalin qalin, fikradaha runta ah ee la xiriira. Una isticmaal macluumaadkan asalka ah si aad u horumariso soo bandhigid fudud mar dambe
4. Ku xooji daraasadda qaybta ugu dambeysa
Markaad gaarto maalmo ka hor imtixaanka adigoon baran, waxay noqon kartaa sababta ugu dambeysa ee ardaygu u go'aansado inuusan isku dayin. Haddana weli waxaa jira waqti aad naftaada fursad siiso. Wax kubarashada cadaadiska waa dadaal weyn. Hase yeeshe, waxaad nasiib u yeelan kartaa in wax lagaa weydiiyo imtixaanka aad ku baratay fiditaankan ugu dambeeya.
5. Fahamka akhriska
Waxaa jira khaladaad xagga tarjumaadda ah, oo bilowgiiba, si xun u hagaajinaya suurtagalnimada helitaanka jawaabta saxda ah. Sidaa darteed, si taxaddar leh u akhri macluumaadka oo u hur waqtiga aad ugu baahan tahay su'aashan. Maaha inaad rabto inaad si dhakhso leh u sii socoto, imtixaanka waad hore u soo afjari doontaa. Xaqiiqda muhiimka ah waa in horey loogu socdo talaabo talaabo. U adeegso sababayntaada, laga bilaabo bayaanka su'aasha, jawaabta ha la bixiyo. Xaaladaha qaarkood, waxaa laga yaabaa inaadan dareemin inaad diyaar u tahay inaad sameyso. Laakiin sidoo kale way dhici kartaa inaad leedahay awood iyo ilo aad ku muujiso fikradaha ugu waaweyn ereyadaada.
Bilow inaad ka jawaabto su'aalaha fudud ama qodobbada aad jawaabta u taqaan. Ha ku dhegin jimicsiyadahan u muuqda kuwa ka dhib badan.
Mar kasta oo aad imtixaan gasho, xitaa markaad si dhammaystiran ugu diyaar garowday imtixaanka, waxaad la kulantaa heer cayiman oo hubaal la'aan ah maxaa yeelay ma ogid waxa su'aalaha gaarka ahi noqon doonaan. Waxaa laga yaabaa inaad taqaanid saaxiib kaas oo mar uun ku guuleystey inuu ku aflaxo imtixaan isagoon baran. Tani xoogaa lagama yaabo, gaar ahaan, marka lagu jiro marxaladda jaamacadeed marka heerka dhibka maadooyinka uu aad u sareeyo. Laakiin, iyadoo ay taasi jirto, waad qaadan kartaa imtixaanka oo aad siin kartaa isku day. Xaqiiqdii, waayo-aragnimadani waxay ku siin kartaa casharro aad muhiim u ah mustaqbalka. Taasi waa, waayo-aragnimadani waxay kaa caawin kartaa inaadan ku celin qaladaad isku mid ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Sameynta iyo daraasadaha » Noticias » Talooyin » Sidee loo gudbaa imtixaan aanad baran?
Waa maxay kala dambayn